MOH Singapore - Aka, Footkwụ & Ọnụ Ọrịa | OMG Ngwọta
MOH Singapore - Aka, Footkwụ & Ọnụ Ọrịa
Isi Iyi: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HiYt9Izv-24
Onyeozi ahụ ga - achọ ịkọwa mkpa ọ dị ịnọgide na-edebe ụkpụrụ dị ọcha nke onwe gị na gburugburu ebe obibi iji belata ohere nke HFMD. Ndị nne na nna kwesiri ijide n'aka na ụmụ ha na - eme omume ọma ndị a:
Saa aka na ncha tupu i rie nri na mgbe ị na-aga ụlọ mposi;
Kpuchie onu na imi na akwa mgbe ị na-agba ụra ma ọ bụ na-akwagharị, ma tụfuo anụ ahụ n'ime ozugbo;
Ekerela ihe oriri.
Ndị nne na nna kwesịkwara ịchọpụta na ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ ngwa ndị e merụrụ site na nzuzo ma ọ bụ ederede ederede kwesịrị kpochara tupu ha ejiri ya ọzọ.
Ndị nne na nna kwesịrị ịjụ dọkịta ozugbo ma ọ bụrụ na nwa ha nwere ahụ ọkụ, ọnya ọnya na ọnyá na nku, ọbụ ụkwụ ma ọ bụ nkwụsị. Ụmụaka nwere HFMD kwesịrị ịnọ n'ụlọ ruo mgbe ụbụrụ niile akpọnwụla. N'oge a, a ghaghị izere ụmụaka ndị ọzọ ruo mgbe nwa ahụ ga-alọghachi. A ghaghị ịkpọ nwa ahụ n'ebe ọ bụla ma ọ bụ ebe ndị mmadụ juru ebe niile. Ekwesịrị ịdị na-edebe ihe ọcha dị ọcha n'ụlọ iji gbochie ịnyefe ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ.
Gịnị bụ Ọrịa Aka, Footkwụ & Ọnụ?
Aka, ụkwụ na ọrịa ọnụ (HFMD) bụ ọrịa mmadụ nke ọrịa nje nke picornaviridae kpatara. Ihe kachasị njọ nke na-akpata HFMD bụ coxsackie A16 nje virus na 71 enterovirus (EV-71), ma enwere ike ịkpata nsogbu dị iche iche nke coxsackievirus ma ọ bụ enterovirus.
HFMD bụ ọrịa na-efekarị ọrịa na-efekarị na nke na-ebute ọrịa na-arịa ọrịa na-adịghị mma, nke na-esochi ọkụ ọkụ nke nwere ike ịgụnye akpụkpọ aka, ụkwụ, na oghere ọnụ. HFMD bụ ihe a na-ahụkarị ma na-emetụtakwa ụmụ ọhụrụ na ụmụaka, mana enwere ike imetụta ndị toro eto na-enweghịzi nkwata na oge. Nje virus ndị na-akpata HFMD na-agbasa site na nkwụsị aka na imi, nsụ, ma ọ bụ feces nke onye oria. HFMD na-emekarị na obere ọrịa na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara, na-emekarị n'oge okpomọkụ na oge mgbụsị akwụkwọ. Oge nkwụsị nke mbụ bụ 3-6 ụbọchị.
HFMD ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na ọrịa ụkwụ na-ọnụ (nke a makwaara dị ka ọnyá ụkwụ na ọnụ), ọrịa a maara nke ọma na-emetụta atụrụ, ehi, na ezì (ọrịa abụọ ahụ sitere n'aka ndị ezinụlọ picornaviridae kpatara) adịghị ebufe n'etiti anụmanụ na ụmụ mmadụ.
Ihe mgbaàmà mmalite nke prodromal yiri ka ọkụ ga-abụkarị ọnya akpịrị. Enweghi agụụ na izugbe n'ozuzu nwere ike ime. N'etiti ụbọchị abụọ na ụbọchị abụọ mgbe ụnwụ ahụ malitere, ọnyá dị mgbu nwere ike ịpụta na ọnụ, akpịrị, ma ọ bụ abụọ. A na-ahụ ọkụ (vesicle) nwere ike ịpụta ìhè na aka, ụkwụ, ọnụ, ire, n'ime cheeks, na mgbe ụfọdụ (ọ bụ n'ozuzu, ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke ga-akpata site na afọ ọsịsa). HFMD na-edozi ya mgbe 7-10 gasịrị.
Mgbaàmà nke HFMD nwere ike ịgụnye
Mkpịsị na-egbu mgbu, intraoral, ọhụụ, ma ọ bụ ihu ihu, ọnya afọ ma ọ bụ ọnyá
Mgbu ọkụ na-egbuke egbuke, na-esite n'ọkụ aka ọjọọ, na ụkwụ na-egbu egbu, na mgbe ụfọdụ na egbugbere ọnụ. Ọgba aghara anaghị adịkarị njọ maka ụmụaka, mana enwere ike ịkpo ọkụ maka ndị okenye
Ogbugbu ma ọ bụ blisters nwere ike ịnọ na obere ụmụaka na ụmụ ọhụrụ
Mmetụta n'ahụ ụmụ ọhụrụ na ndị na-eto eto
A na-emekarị nyocha ọ bụla site na ihe ngosi na mgbaàmà na-egosi. Ọ bụrụ na nchoputa ahụ adịghị edozi, a pụrụ ịchọta ọnya akpịrị ma ọ bụ stool egosiputa iji mata ọrịa ahụ site na omenala. Oge mmechi nkịtị (oge n'etiti ọrịa na mmalite nke mgbaàmà) sitere na ụbọchị atọ na isii.
Otú HFMD si agbasa
HFMD na-agbasa site na onye mmadụ gaa na onye site na nkwụsị aka na ntanye anụ, mmiri, ụbụrụ, na mmiri nke ọkụ ọkụ nke onye ọrịa.
Onye na-arịa HFMD kachasị efe efe n'oge ọrịa ahụ. Ọ bụ ezie na nje ahụ nwere ike ịnọgide na-adịgide na stool ruo izu ole na ole mgbe ọrịa gasịrị, onye ahụ na-agbakarị na-efe efe mgbe ọrịa na-edozi. Ka o sina dị, ịdị ọcha nke onwe na gburugburu ebe obibi ka ga-anọgide na-echekwa.
Enwere enweghị ọgwụgwọ kpọmkwem ewezuga enyemaka nke mgbaàmà. Ọgwụgwọ na ọgwụ nje anaghị adị irè ma egosighi ya.
Enwere ọ dịghị ọgwụ HFMD ugbu a.
Maka ama ndi ozo banyere HFMD, biko lee FAQ na MOH website http://www.pqms.moh.gov.sg/apps/fcd_faqmain.aspx, Ma ọ bụ ndị Nchịkwa Ọrịa Na-ahụ Maka Ụlọ Akwụkwọ na Ụlọ Ọrụ Ụmụaka.
MOH na-ebipụta akwụkwọ akụkọ kwa izu na ọrịa ọrịa na-efe efe Ebe a.
Nzuzo 16481 9 Echiche Taa